Inogadzirisa matambudziko ari kuve neIOS 11 nemamwe mapurogiramu | IPhone nhau
Gadzirisa matambudziko ari kuve neIOS 11 nekumwe kunyorera
Tiri kunyatsoteedzera bvunzo dzese dziri kuitwa dzezvazvino kuburitswa kwevakomana veblock. Kuedzwa kwemidziyo mitsva uye kuyedzwa kweazvino Apple software zvigadzirwa. Uye ndezvekuti hazvisi zvese zvaizove iyo nyowani iPhone, unogona zvakare kumutsiridza yako zvishandiso kuvandudza ivo kune yazvino vhezheni yeIOS uye kuwana mitsva maficha.
iOS 11 yaunza akawanda maficha maficha, kunyanya padanho rePadad, nyowani yekushandisa sisitimu yeApple nharembozha inoenderera mberi nekutipa mabasa matsva. Isu takave nemapfumbamwe beta shanduro munguva yezhizha kuti tikwanise kuyedza ese matsva mashandiro uye kuti Apple iunganidze dhata nezve mashandiro eiyo nyowani iOS 11, zviri pachena kuti hapana chakakwana uye kune vazhinji vashandisi varikuzivisa zvisinganzwisisike dambudziko nekushanda kweiyi nyowani iOS 11. Mushure mekusvetuka tinokupa iwe hwese ruzivo rwematambudziko ari kutaurwa uye kuzvigadzirisa sei.
1 Dzosa marongero kugadzirisa iOS 11 matambudziko
2 Kuisa kubva pakutanga ndiko kwakanyanya kunaka
Dzosa marongero kugadzirisa iOS 11 matambudziko
Vazhinji vashandisi vari kuzivisa kuburikidza nenzira dzakasiyana-siyana dzemagetsi matambudziko ekuvhura mashandisirwo, Dambudziko nderekuti hazviitike chete nevechitatu-bato kunyorera, zvinoitikawo neApple chairo (idzo dzinouya dzinozvarwa neIOS). Kunonoka, kupaza kwekushandisa ... zvikanganiso zvisingaperi izvo vazhinji vari kuwana.
Zviripachena ichi hachisi chimwe chinhu chinoitika kune vese vashandisi, asi chiri kupararira mukati mese network. Ini ndakakwanisa kuongorora mamwe ematambudziko aya, uye imwe yemhinduro dzinogona kuitika ndeye dzosa pazviruva iPhone wako kana iPad. Kudzorera marongero edhizaivhi takagadzirisa mazhinji ematambudziko akadhonza mudziyo wedu mushure mekugadzirisa kubva kune imwe iOS kuenda kune imwe. Kune izvi isu tinofanirwa kuenda ku Zvirongwa zveapp, tobva tapinda General -> Dzorerazve -> Seta Zvimiro. Nenzira iyi isu tinorasikirwa neese marongero (chimwe chinhu chinofanirwa kugadzirisa akawanda emakanganiso) eedu iPhone kana iPad, asi kwete iyo yakachengetwa data.
Kuisa kubva pakutanga ndiko kwakanyanya kunaka
Asi Kudzorera Zvirongwa haisiyo mhinduro yakanakisa… Uye ndechimwe chinhu apo pese panoburitswa vhezheni nyowani yeIOS isu takataura pamusoro payo: pamberi pechinhu chikuru chekuvandudza system, zvakanakisa kuisa kubva pakutanga. Hongu, iwe ucharasikirwa nezvose zvawakachengeta pane yako iPhone, asi ichi hachizove dambudziko hombe kana uine ruzivo rwakawanda muICloud (Hatisi kutaura nezvemakopi ekuchengetedza asi ruzivo rwakawiriraniswa), uye zviri pachena kuti uchafanirwa kushandisa imwe nguva kudhawunirodha zvese zvinoshandiswa zvaunazvo zvakare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Gadzirisa matambudziko ari kuve neIOS 11 nekumwe kunyorera
Chii chinoitika kwandiri ndechekuti iyo iPhone inopisa chaizvo uye bhatiri rinogara zvakanyanya kushoma.
MARXTER tsime rezita rokutanga akadaro
Pepe, ndine iyo Iphone 7 uye ndakarasikirwa ingangoita maawa maviri pabhatiri richienzaniswa neIOS2.
Ini ndinoonawo kuti kunopisa kana uchivhura Augmented Reality maapplication
Javier Martin Uribe Ceballos akadaro
Kupenya kwacho kuri pamusoro asi kunotaridzika kuve opaque, pasina mwenje
Pindura Javier Martin Uribe Ceballos
pese paunoshandura iyo kuverenga manhamba eiyo ios 9,10,11 ... gadza kubva pakutanga uye usadzorere backup. Ndanga ndichiita izvi kwemakore uye zero zero bhatiri matambudziko. Usambofa wakavandudza pakati peshanduro dzeios, iyo system mukati haina kugadzikana.
Mune yangu kesi, foni inopunzika, handikwanise kushandisa mamwe mapeji, kudonhedza kudonha, bhatiri rinogara zvishoma, ndinofanira kuitangazve iyo nguva zhinji iyi nyowani yekuvandudza ini handidi zvachose, mumwe munhu anoziva kuti ndinogona kudzoreredza yapfuura kana kugadzirisa izvi zvikanganiso zverudzi rutsva Maita basa.
yoana valencia akadaro
Sezvo iyo yekuvandudza kiyi yekutanga isingashande uye inopisa zvakanyanya, handizive kuti ndingaigadzirisa sei
Pindura kuna yoana valencia
Hazvina basa uye ini ndoda kushora Apple nekuti kana vakaita izvi kuitira kuti iwe ugone kutenga zvitsva, kure nazvo handidi kuzotengazve kana kuzvikurudzira. Akave aripo kwemazuva matatu paakada kugadzirisa IOS, izvo zvakaipa kwazvo.
Ini handikwanise kufona, kana chero chinhu chandinoshandisa kumanikidza kutangazve kana vasingauye nechimwe chinhu kugadzirisa izvi munguva pfupi, ini ndinotenga chimwe chinhu chine Android system isina munhu ane dambudziko nazvo.
marco antonio abanto morales akadaro
Ndine iPhone 6 plus uye ini ndakagadzirisa kune vhezheni 11.3 uye chiratidzo chinobuda uye chinoenda kunotsvaga kana chinobuda pasina network
Ini handikwanise kufona kana ini ndachinja chip ini ndatanga patsva network nezvimwe uye hapana chandisingazive chekuita isati yanaka tdo was l
kuti ini ndinogadziridza zvaive zvisizvo
Pindura marco antonio abanto morales